तपाईंको व्यापार कार्डको साथ के गलत छ? | Martech Zone
तपाईंको व्यापार कार्डको साथ के गलत छ?
बुधबार, सेप्टेम्बर 9, 2009 बुधबार, सेप्टेम्बर 9, 2009 Douglas Karr
व्यापार कार्डहरू मेरो लागि सँधै रमाइलो व्यायाम भएको छ। मैले सँधै मेरो व्यवसाय कार्डमार्फत केहि फरक गरें - पहिले मेरो हुन् मेरो फोटो संग ब्लगिंग कार्डहरु, त्यसपछि प्याक पोष्ट आईटी नोटहरू, र हालसालै Zazzle बाट एक डिस्पेंसरको साथ स्लिम कार्ड।
आज म एउटा टेलिसेमिनार हेरिरहेको थिए एलेक्स मन्डोसियन एक व्यवसाय शिक्षा श्रृंखलामा जुन म सदस्यता लिइरहेको छु र उनले एउटा ठूलो अवसर औंल्याए जुन मैले स्लिप पछिल्लोमा गरिनँ ... लगातार तीन व्यवसाय कार्डहरू!
व्यापार कार्डको बारेमा केहि सत्यता
धेरै व्यक्ति आफूले आफूले पाउनु भएको व्यक्तिलाई याद गर्दैनन्।
धेरै जसो केवल फालिएका छन्। तपाईंले त्यस्तो चीजको लागि तिर्नुभयो जुन विरलै लगानीमा फिर्ता हुन्छ!
ती व्यक्तिहरू हुन् जसलाई वास्तवमै राख्छन्, धेरै थोरैलाई मात्र व्यवहार गरिन्छ ... प्राय जसो कारण त्यहाँ प्रायः कारण हुँदैन!
के संग सुधार गर्न सकिन्छ आफ्नो मेरो व्यवसाय कार्ड?
तपाईंको व्यवसाय कार्डमा तपाईंको फोटो राख्नुहोस्। यसले व्यक्तिहरूलाई सम्झिनको लागि अनुमति दिनेछ कि तपाईं को हुनुहुन्छ!
एलेक्स भन्छ कि तपाइँ एक शामिल गर्नुपर्छ नैतिक घूस। अर्को शब्दहरुमा, के तपाइँको कार्ड मा केहि केहि छ कि तपाइँ प्रदान गर्न को लागी कसैलाई कार्य गर्न नेतृत्व गर्नेछ? उसको उदाहरण १-1०० नम्बर एक प्रि-रेकर्ड सन्देशको साथ हो। यो अव्यवसायिक र सुरक्षित छ ... र जसले यसलाई कल गर्दछ उसले सन्देशबाट फाइदा लिन सक्छ।
तपाईंले यसलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो घटनाको लागि अनुकूलित गरिएको सन्देश समावेश गर्नुहोस्। यदि तपाईं नेटवर्कि event घटनामा हुनुहुन्छ भने, ती घटनाहरूको लागि केहि कार्डहरू अर्डर गर्नुहोस्। यदि तपाईं घटनामा बोल्दै हुनुहुन्छ भने, घटना समावेश गर्नुहोस्! यदि तपाईं सम्मेलनमा हुनुहुन्छ भने ... सम्मेलन राख्नुहोस्। द्वारा कार्ड अनुकूलन गर्दै घटनामा, तपाईले भर्खर एकको साथ प्राप्तकर्तालाई आपूर्ति गर्नुभयो लघु बिलबोर्ड तिनीहरूलाई सम्पर्क बनाउनको साथ साथै भाइरल कम्पोनेन्ट प्रदान गर्न आमन्त्रित गर्न। जब एलेक्सले 500०० कार्डहरू बाहिर निकाल्छ, ऊ आफ्नो साइटहरू र फोन नम्बरहरूमा २,००० भ्रमण गर्दछ। त्यो एक राम्रो भाइरल घटक हो!
मँ मेरो व्यापार कार्डको अर्को सेट अर्डर गर्न जाँदैछु र म यी सुझावहरू समाहित गर्न छु। मेरो फोटो थपिने छ (लामो सास!), म केही सल्लाह र सुझावहरूको साथ एक नि: शुल्क डाउनलोडको लिंक समावेश गर्न जाँदैछु, र म Google भ्वाईसमा मेरो बारेमा केहि बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको साथ राम्रो सन्देश प्रि-रेकर्ड गर्न जाँदैछु। व्यापार
मलाई रुचि दिनुहोस् यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने व्यवसाय श्रृंखलामा म सदस्यता लिइरहेको छु। यो थोरै मूल्यवान छ, तर यदि मैले व्यापार कार्डहरू दिएर एकल सम्झौता पाएँ भने, यसले सम्पूर्ण व्यवसाय श्रृंखलाको लागि भुक्तान गर्नेछ ... र म मात्र पहिलो भिडियोमा छु। मैले मेरो भर्खरका कार्डहरूमा धेरै प्रशंसा पाएको छु - तर मँ यो भन्न सक्दिन कि उनीहरू भाइरल भए वा मेरो व्यापार भयो।
टैग: विज्ञापन खर्च पूर्वानुमानफेसबुक विज्ञापन खर्चफेसबुक मोबाइल विज्ञापन खर्चगुगल प्लस विज्ञापन खर्चग्राफिक डिजाइनप्लेटफार्महरूसेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउडसामाजिक विज्ञापन खर्चट्विटर विज्ञापन खर्च
जवाफ खोज्न स्मार्ट हुनुहोस्
सेप्टेम्बर 10, 2009 मा 12: 31 AM
एलेक्स मन्डोसियन मानिस हो! तपाईंले टेलिसेमिनार कसरी चलाउने भनेर चरण-दर-चरण विवरणहरू नहेरेसम्म पर्खनुहोस्। धेरैले गलत बुझ्छन् !!
सेप्टेम्बर 10, 2009 मा 2: 12 AM
म चाहन्छु कि म मेरो स्रोत, डग, उद्धृत गर्न सक्छु, तर मलाई याद छैन कि मैले यो कहाँ पढेको थिएँ, धेरै समय अघि: तपाईंको तस्विरको साथ व्यापार कार्डहरू रद्दीटोकरीमा फ्याँकिने सम्भावना 50% कम हुन्छ। सायद अरू कसैले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छ।
सेप्टेम्बर 10, 2009 मा 3: 34 AM
म यसमा शंका गर्दिन, बब! र केहि कम्पनीहरूले व्यापार कार्डहरूमा एकदम थोरै खर्च गर्छन् - यदि तिनीहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग भएमा तिनीहरूको मूल्य पहिचान गर्दैनन्।
सेप्टेम्बर 10, 2009 मा 3: 48 AM
याद गर्नुहोस्, यो तपाईंको कार्डलाई यादगार बनाउनको लागि होइन। यो तिनीहरू घर वा अफिसमा फर्कँदा कारबाही गर्ने सम्भावनाहरू प्राप्त गर्ने बारे हो।
सेप्टेम्बर 10, 2009 बेलुका 2:09 बजे
राम्रो भन्नुभयो, प्याट्रिक!
सेप्टेम्बर 10, 2009 मा 2: 18 AM
तपाईंले आफ्नो कार्डहरूमा तपाईंको लोगोको प्रकृति जस्तै कागजको हवाइजहाज प्रयोग गर्नुपर्छ। हुनसक्छ तपाइँको सम्पूर्ण कार्ड तपाइँको लोगो को पहिलो नजर मा हो तर एक पटक यो खुल्छ यो तपाइँले माथिको पोस्ट मा उल्लेख गरेको जानकारी छ। गर्न गाह्रो हुन सक्छ तर निश्चित रूपमा सफा र यादगार हुनेछ।
सेप्टेम्बर 10, 2009 मा 3: 33 AM
यो एक राम्रो विचार हो, bcreative! म भविष्यमा यो विचार संग केहि गर्न को लागी धेरै राम्रो देख्न सक्छु। धन्यवाद!
सेप्टेम्बर 10, 2009 मा 3: 40 AM
डग मेरो बेनामी अवतार जाँच गर्नुहोस्, ब्लगको साथमा जान्छ 🙂 मैले ट्विटरमा लग इन गरें र एउटा ट्विटर अवतार छ जुन आफैंको तस्वीर हो किन पप अप भएन भनेर अचम्म लाग्छ
@bcreative - तस्बिरहरू gravatar.com बाट खिचिएका छन् - एउटा पाउनुहोस्! 🙂
मार्क्स 1, 2011 मा 3: 44 PM
पहिलो नजरमा समग्र अनुभूति यो अधूरो छ। मलाई लाग्छ टाइपोग्राफीको पक्षमा थप काम र थप तेज पृष्ठभूमिले मद्दत गर्नेछ। के परिवर्तन गर्ने भनेर भन्न सक्नुहुन्न तर तपाई केवल एक राय सोध्नुहोस्।